Ziqhelise abavelisi bolusu, abaxhasi - China Ziqhelise ulusu mveliso
Isikhumba esinoSilicone esikhulu soQeqeshiso loLusu lweArt Artificial Blank Full Back Tattoo Practice Skin
I-silicone yokwenyani, ithambile kwaye kulula ukuyifaka umbala, ubukhulu be-0.3cm, Inkcazo: Ubume beFlexible, ubume besikhumba, iipropu ezilungileyo zabaqalayo. Ukulinganisa iimpawu zolwakhiwo lolusu lomntu, Yenziwe ngesixhobo esikhethekileyo esikufutshane nokubumba kolusu lomntu, kunye nokuthamba kwayo kuthambile kwaye kuyoluka kufutshane nolusu lomntu. Yeyona nto iluncedo kakhulu kwabaqalayo ngaphambi kokusebenza kwenyani. (Abanye abafundi bathi ulusu olwenziwayo kulula ukungcola. Nantsi indlela elungileyo kuwe, i ...
39.5 * 30 * 0.3CM A3 ubukhulu ngerabha Ulusu olwenziweyo lolusu olusisigxina lwe-Elastic Silicone Tattoo Practice Skin
1.Quantity: 1pcs 2.Made ukutya-grade abicah izinto 3.Flexible kwaye iyafana isikhumba somntu, elingqingqwa ngokwaneleyo ngenxa mbini-icala ukusetyenziswa 4.Free ukupeyinta nokudlulisa ipateni, ukuba ulusu practice kakuhle ukuba wabaqalayo ukusebenzisa. Ingcaciso: Izinto: Ubungakanani beSikhumba seArtificial Artificial: 395 * 300 * 3MM Iphakheji ibandakanyiwe: 1 x Ukuziqhelanisa noTattoo Inkcazo yolusu kunye nolusu olugciniweyo olugcina i-inki kwaye luyasula ngengubo okanye ngetawuli yephepha ukususa i-inki engaphezulu! Yintoni inqaku ...
I-20cm * 30cm yoLusu lokuziqhelanisa nolusu lwe-Microflading Tattoo
Ukuziqhelanisa nolusu olungenanto kulusu olusisigxina lweMicroblading yeTattoo Isixhobo esiNcedisayo Isikhumba soLuhlu: 1.Ulusu lokwenza umvambo akukho bumdaka kunye nemvakalelo yokuthinta ulusu. 2.Plain yokuziqhelanisa ne tattoo ngokukhululekileyo, kukunceda ukuba ufunde njani ukwenza umsebenzi we tattoo ophezulu. 3.Practice ubuchule obahlukeneyo, ukusuka ekuchazeni ukuya kufinyele i-4.Extra ethambileyo, ulusu njengombala, uburhabaxa busondele kakhulu kulusu lomntu kwaye uziva ngokufana nolusu lomntu. 5.Ideal yokurhangqa iingalo okanye imilenze kunye nendawo ezifubeni okanye emqolo ...
Intloko ye-3D yobuso bolusu 3D Microblading Makeup engapheliyo isilumkiso somlomo womnwe womntu entlokweni yobuso besikhumba
I-3D Mannequin iNtloko yoBuso obuQhelekileyo bokuziqhelanisa nolusu iquka: 1. Isici esinjengobomi esisigxina sokwenza izithambiso ulusu 2. Amehlo nomlomo onokutshintsha ngokulula ukuze zisetyenziswe rhoqo. 3. Indawo yokufaka iliso ikwagubungela imijelo yamashiya 4. Ukufakwa okongeziweyo kuthengiswa ngokwahlukeneyo Le mveliso isetyenziselwa abafundi bezithambiso abasisigxina. Iluncedo kakhulu kubaqalayo. Ungawatshintsha amehlo kwaye ...
Yenziwe ngerabha eguqukayo efana nolusu oku kulunge kakhulu ekufundeni indlela yokwenza umvambo wokwenza umvambo wokufundela ukwenza umva kwicala elingasemva lale ulusu olungelulo. Ubunzima be-20x15cm: 50g Cwangcisa ukuhamba kwakho-I-Ink ingangcungcutheka. Iseshoni yokuziqhelanisa yindlela elungileyo yokuqonda ukuba usebenza njani kwi tattoo. Ngokuphucula izakhono zakho, uya kuthintela ukuchitheka nokusasazeka kwe-inki ngexesha le tattoo yakho yokuqala. Umzekelo, unokufumanisa ...
Ulusu olusisigxina lokuQeqesha ulusu 290 * 195 * 3MM saqala ukujiya kweSilicone Tattoo Practice Skin
1. Uncedo lwabaqalayo ngokukhawuleza baphakamisa inqanaba le tattoo 2. Izinto zokwenziwa, ezikhuselekileyo, ngaphandle kwezinto eziyingozi. 5. Wenza umsebenzi womzobi we tattoo ube lula. Igama: ukuziqhelanisa nolusu lwezixhobo: Ubungakanani bokuPaka abicah: 290 * 195 * 3MM Ubunzima obupheleleyo: 0.22 kg Olona Lusu luLungileyo lweTattoo Kwiminyaka embalwa nje edlulileyo, amagcisa tattoo abenokhetho olunqongopheleyo xa kusenziwa ulusu. Uninzi lwenziwe ngerabha okanye ngeplastiki, ...
Bamba ingalo ngebhanti ye-Elastic Silicone yeTattoo yokuziqhelanisa nolusu
1.Izinto: Isikhumba esenziwe ngokufakelwa ubuchule obutsha kunye nokuzama ukwandisa iseti yabo yezakhono. Ulusu lokuziqhelanisa ne tattoo sesona sixhobo sokugqibela sokuhlengahlengisa kunye nokwenza iziqwenga onokuzibonisa abathengi abanokubakho. Uyilo namhlanje lubandakanya ukuqaqambisa okuntsonkothileyo kunye nokwenza mnyama kuthatha ...
I-20 * 30 * 0.13cm ye-tattoo eyebrow yokwenza ulusu ekumgangatho ophezulu ukwenziwa okusisigxina kwe-eyebrow tattoo tattoo Skin Microblading
Ukuziqhelanisa noTattoo ulusu ekumgangatho ophezulu woqeqesho lolusu *** Iphakheji: 1pcs *** Umphezulu wethafa loyilo kunye nokuzilolonga, Ziqhelanise neendlela ezahlukeneyo, ukusuka ekucaciseni ukuya ekufakeni *** Yenziwe kwinto efana nolusu *** Vumela ukuba uphucule Izakhono ngaphandle kokuziqhelanisa nolusu lokwenyaniFlexible kwaye inoluvo olufanayo njengesikhumba somntu, Ityebile ngokwaneleyo ukuba isetyenziswe kabini emacaleni Umsebenzi: Ukuziqhelanisa neTattoo Ubungakanani: 200 * 300 * 1.3mm Ubunzima: 0.1kg Ukupakisha: 1pc / isikhwama se-opp Indlela yokusebenzisa ngokuSebenzayo iTattoo Practice Skin Ulungelelwaniso ...
I-20 * 15 * 0.13cm ye-tattoo eyebrow yokwenza ulusu kwizinga eliphezulu kumgangatho osisigxina we-makeup eyebrow tattoo tattoo tattoo Microblading supply skin
Ukuziqhelanisa noTattoo ulusu ekumgangatho ophezulu wokuqeqesha ulusu lweempawu zokwenza izinto: 1. Nceda abaqalayo ukukhulisa ngokukhawuleza inqanaba le tattoo 2. Izinto zokwenziwa, ezikhuselekileyo, ngaphandle kwezinto eziyingozi 3. Flexible, imvakalelo eyiyo 4. Ilungele abaqalayo kunye namagcisa anamava. 5. Wenza umsebenzi womzobi we tattoo ube lula. Ingcaciso: 1. Izinto: Isikhumba seArtificial Artificial 2. Ubukhulu: 200 * 150 * 1.3MM 3. Ubunzima bomzimba: 80g / PCS Package Ifakiwe: I-1x Tattoo Practice Skin Tattoo Practice Skin - Iingcebiso kunye neziNcedo azenzi ...